Wasaiirka Arimaha Dibada Soomaaliya Oo khudbad uu jadeeyay shika Jaamacada Carabta ku weeraray Dowlada Imaaraatka – Daily Som
Wasaiirka Arimaha Dibada Soomaaliya Oo khudbad uu jadeeyay shika Jaamacada Carabta ku weeraray Dowlada Imaaraatka
By Staff on March 10, 2018 No Comment
Wasiirka Arimaha Dibada Xukuumada Soomaaliya Amb. Axmed Ciise Cawad ayaa ayaa si adag uweerary Dowlada Imaaraatkla Carabta oo faragalin qaawan ku haysa Madax banaadida iyo Midnimada Jamhuuriyada Fedareaalka ah ee Soomaaliya Xili uu ka qayb galayay shirka Wasiirada Arimaha Dibada Ururka Jaamacada Carabta oo qodob ka mid ah uu quseeyo Xaalada Dekada Berbera ee dalka Soomaaliya.
Kulankii 149 ee wasiirada Arimaha Dibada Jaamacada Carabta ayaa waxaa looga dooday Arimaha Dhwr ah oo gaarayay ilaa 9 qodob waxaana ka mid ahaa warqad Dacwo ah oo ay dowlada Soomaaliya ka gudbisay Shirkada Imaaraadka ee Dubai Ports World oo dhawaan Hishiis Xaaraan ah la gasshay Dowlada Itoobiya iyo Maamulka Somaliland.
Wasiir Cawad ayaa khudbadiisa ku weerary Dowlada Imaaraadka asiga oo usheegay in ay waajib ku tahay in ay Ixtiraamto Madaxbaanaanida iyo Midnimada Soomaaliya.
Dowlada Imaaraadka ayaa sida la rumaysan yahay waxa ay dowlada Soomaaliya ka waysay Ogalaasho ku aadan Arinkaan waxaa ku dhawaad Madaxwaynaha Soomaaliya iyo Ra’isil wasaarahiisa iyo wasiiro uu ugu horeeyo wasiirka Arimaha Dibada ayaa Imaaraadka ku tagat SAafaro loo malaynayo in xal loogu raadinayay Arintaa, kuwaa oo gaarayay ilaa 5 jeer oo ay isku fahmi waayeen sida ay wax u wado dowlada Imaaraadka.
Dhawaan ayay ahayd Markii ay dowlada Itoobiya Dp waorla iyo somaliland Abu Dubai kukala saxeexdeen hishiis ay kula wareegayso dekada Berbera, taas oo ay saami ahaan ukala qaybsadeen DP World oo heshay51% Somaliland oo iyane heshay 30% iyada oo ay dowlada Itoobiya qaadatay 19% .
Wasaiirka Arimaha Dibada Soomaaliya Oo khudbad uu jadeeyay shika Jaamacada Carabta ku weeraray Dowlada Imaaraatka added by Staff on March 10, 2018
© 2018, ↑ Daily Som